Vanhu vasina kubaiwa vanorambidzwa kubva munzvimbo zhinji dzeveruzhinji muAustria
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Austria Kuputsa Nhau » Vanhu vasina kubaiwa vanorambidzwa kubva munzvimbo zhinji dzeveruzhinji muAustria
Austria Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Chancellor weAustria Alexander Schallenberg
Kurambidzwa kwekupinda kunotanga svondo rinouya uye kuchashanda kumakofi, mabara, maresitorendi, theatre, ski lodge, mahotera, vanogadzira bvudzi uye chero chiitiko chinosanganisira vanhu vanopfuura makumi maviri nevashanu.
Hurumende yeAustria inoti inotarisira nhamba nyowani dzeCCIDID-19 kuti dzisvike pakakwirira mumavhiki anotevera.
Vese vanhu vasina kubayiwa vanozorambidzwa kupinda murondedzero refu yenzvimbo dzeveruzhinji, kusanganisira mabara, macafe nemahotera.
Paizove nemavhiki mana ekuchinja nguva, panguva iyo avo vakagamuchira yavo yekutanga dosi yekudzivirira uye vanogona kupa isina kunaka PCR bvunzo vanozosunungurwa kubva kumitemo.
Achitaura nezvekukurumidza kusingatarisirwe muzviitiko zvitsva zveCCIDID-19, Chancellor weAustria, Alexander Schallenberg, akazivisa kuti vanhu vese vasina kubatika vachakurumidza kurambidzwa kupinda murondedzero refu yenzvimbo dzeveruzhinji, pakati pavo mabhawa, maresitorendi, mabhawa nemahotera.
"Kushanduka kwacho kwakasarudzika uye kugara kwemibhedha yevanochengeterwa zvakanyanya kuri kuwedzera nekukurumidza kupfuura zvataitarisira," Schallenberg akadaro mukuzivisa zvirambidzo zvitsva.
Sekureva kwaSchallenberg, kurambidzwa kwekupinda kuchauya svondo rinouya uye kuchashanda kumakofi, mabara, maresitorendi, matheatre, ski lodge, mahotera, vanogadzira bvudzi uye chero chiitiko chinosanganisira vanhu vanopfuura makumi maviri nevashanu.
Zvirambidzo zvitsva zvinogona kukanganisa chikamu chikuru che OsitiriyaHuwandu hwevanhu, pamwe ne36% yevagari vayo havasati vabaiwa zvizere hutachiona hweCOVID-19.
Mhosva nyowani dzezuva nezuva dzeCCIDID-19 dzakarova 9,388 nezuro, dzichienda OsitiriyaRekodhi rekodhi ye9,586 yakanyorwa gore rapfuura, uye hurumende inoti inotarisira kuti huwandu huchasvika hutsva mumavhiki anotevera.
Kunyange matanho achatanga kushanda nemusi weMuvhuro, Schallenberg akati pachave nenguva yekuchinja kwemavhiki mana, panguva iyo avo vanenge vawana mushonga wavo wekutanga wekudzivirira uye vanogona kupa PCR bvunzo dzisina kunaka vachasunungurwa pamitemo. Mushure memavhiki mana iwayo, zvakadaro, nzvimbo zhinji dzeveruzhinji dzichavhura mikova yadzo chete kune vakanyatsodzivirira kana avo vachangobva kupora kubva kuhutachiona hweCOVID-19.
Zvirambidzo zvitsva, izvo mirau yegirazi yakatemerwa muguta guru reVienna pakutanga kwesvondo rino, hazvishande kune vashandi vepanzvimbo, chete kune vatengi, sekupokana kwachancellor "Imwe ibasa rekuzvivaraidza rinoitwa nekuzvidira - hapana anondimanikidza kuenda bhaisikopo kana resitorendi - imwe yacho inzvimbo yangu yebasa."
Hurumende inotungamirwa nevanochengetedza yakataura zvakatoomarara zvirambidzo pane vasina kuvharirwa kana mazana matanhatu kana anopfuura emibhedha yekuAustria yekuchengeta varwere vakazadzwa nevarwere veCCIDID-600, vachivaisa pakuvhara. Kubva neChina, nhamba iyi yakamira pa19, asi yave kukwira nechiyero chinodarika gumi pazuva.
Ositiriya iri kure nenyika yekutanga yeEurope kuita zvirambidzo zvakafanana zvekutsvaira, neFrance neItari vachigadzira yavo yedhijitari yekudzivirira nzira yekusimbisa matanho.
Jerimani, zvakare, iye zvino ari kufungisisa pfungwa imwe chete. Sezvo nyika dzeGerman dzichiita kuwedzera kuvharika uye zvinodiwa zvekudzivirira, Chancellor anobuda Angela Merkel akatsikirira "zvirambidzo zvakakomba" pane vasina kuvharirwa muGermany yese kutanga kwesvondo rino.